भरतपुर अस्पताललाई सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न ८ करोड विनियोजन – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
भरतपुर अस्पताललाई सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न ८ करोड विनियोजन
“चितवन सरुवा रोगको राजधानी नै हो । डेंगे, स्क्रपटाईफस, चिकन गुनिया, ल्याप्टो स्पाईरोसि जस्ता सरुवा रोग चितवनबाट नै फैलिएको हो । तर, यसको छुट्टै उपचार गर्ने अस्पताल यहाँ छैन,”
०६ मंसीर, भरतपुर । भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा.भोजराज अधिकारीले भने, “भरतपुर अस्पतालले एक बर्षभित्र सरुवा रोग विभाग सञ्चालन गर्नेगरी तयारी थालेका छौँ ।” सरुवा रोग विभाग सञ्चालन गर्न सरकारबाट स्वीकृत समेत भैसकेको छ । पौष महिनामा टेण्डर सञ्चालन गरिने डा. अधिकारीले बताए । विभाग सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरिय सरुवा रोग अस्पताल निर्माण उपचार एवम् स्वास्थ्य विपत व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, वाग्मती प्रदेशको हेटौडा नभई चितवनमा नै बनाउन लागिएको हो ।
“प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि ३ सय शैयाको केन्द्रिय र न्यूनतम ५० शैयाको प्रदेश स्तरिय र अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न भनेको छ,” अध्यक्ष डा.अधिकारीले भने, “भरतपुर अस्पतालबाट सञ्चालन हुने भएकाले सरुवा रोग विभाग भनेका हौँ ।”
भरतपुर अस्पताल भित्र पहिलो चरणमा ५० शैया सहितको सरुवा विभाग स्थापना गरिने छ । त्यसका लागि भवन छुट्टै भवन निर्माण गरिने उनले बताए । भरतपुर अस्पतालको गुरुयोजना अनुसार आगामी बर्षका लागि २४ करोड ५० लाख बजेटका योजना सञ्चालन हुँदै छन् ।
“डि ब्लक तयार गर्दा सरुवा रोगलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिसहितको संरचना निर्माण गर्दैछौँ,” “सरुवा रोग विभाग छुट्टै भवनमा निर्माण हुन्छ ।”
सरुवा रोगका विभागका लागि भवन, प्रयोगशाला समेत छुट्टै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विभाग सञ्चालन गर्न १० चिकित्सक सहित ३० जना नर्सिङ दरबन्दी माग गरिएको डा. अधिकारीले बताए । उनका अनुसार काठमाण्डौँ बाहिर सरुवा रोगको विभाग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको भरतपुर अस्पताल मात्र हो । भरतपुर अस्पतालमा अहिले आकस्मिक सेवा विस्तारमा ९ करोड, विशिष्टिकृत सेवा सञ्चालनमा ७ करोड र ट्रमा युनिटको विस्तार गर्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।